South Africa congratulates Mugabe on 'successful' vote - Telegraph
South African President Jacob Zuma on Sunday congratulated Zimbabwe's Robert Mugabe for his re-election in a "successful" vote, and called on opposition to drop its objections to the result.
President Zuma extended his "profound congratulations" to his Zimbabwean counterpart, a statement from South Africa's foreign ministry said.
"President Zuma urges all political parties in Zimbabwe to accept the outcome of the elections as election observers reported it to be an expression of the will of the people," it said.
Meanwhile Australia joined the United States and Britain in questioning the credibility of elections in Zimbabwe as Bob Carr, the foreign minister, called for a re-run of the polls.
Zimbabwe's 89-year-old Robert Mugabe won a landslide victory in last week's presidential and parliamentary polls, but his rival Morgan Tsvangirai described the vote as "fraudulent" and vowed to boycott the government.
Mr Carr said he was calling for fresh elections after concerns had been raised, including by Australia's embassy in Harare, about the voters roll and voting procedures.
"These appear to have disenfranchised large numbers of voters and raised doubts about the credibility of the election results,"